Faaidada Xubinimada Ururka Kalkaaliyayaasha iyo Umulisooyinka Somaliland ee SLNMA
Tuesday, 03 February 2015 06:35	Latest
· In aad noqoto xubin firfircoon oo ka mid ah ururku waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad ku xidhnaato xirfadlayaasha kale ee dhigaaga ah ama kula midka ah.
· Waxbarasho online ah oo gaar ah: Mareegta ama Website ka u gaar ah ururka waxa aad ka helaysaa xog ku saabsan fariimaha hogaanka ururka,fursadaha soo baxa ee muhiimka ah iyada oo aan loo shaacinayn dhamaan bulshada, iyo sidoo kale Dastuurka, istaratijiyada, hiigsiga, hiiraalka ururka iyo qodobo kale oo ay muhiim tahay in aad ogaato.
· Shabakado fursado ah: Marka aad xubin ka noqoto ururka waxaa si xoogan joogto u noqonaya xidhiidhka idinka dhexeeya ururka adigoo fursad u helaya in aad ka qayb gasho shirarka uu ururku qabto isla markaana aad fursad isu heshaan bahda kale ee aad isu xirfada tihiin idinka oo isa warydaarsanaya fikrado midho dhal ah.
· Waxbarasho: Ururada xirfadlayaashu aalaaba waxa ay siiyaan dadka xubnaha ka ah fursado waxbarasho oo kor loogu qaadayo aqoontooda sida siminaaro, shirar iyo waxbarasho ay ku qaataan hanaanka Online ah waxaana mudnaanta la siiyaa fursadaha soo baxa dadka xubnaha ka ah ururka.
· Hadii aad xubin ka noqoto ururka waxaad bilaash ku helaysaa nuqul ka mid ah Magazine uu ururku soo saaro oo xambaarshan macluumaad badan.
· Ururka SLNMA waxa uu fursad kuu siinayaa in xirfadlayaasha ka diiwaan gashan ay fikrado isu waydaarsadaan islamarkaana ku falanqeeyaan caqabadaha ka soo waajahay xirfadooda
· Hadii aad ka diiwaan gashan tahay ururka oo caqabad kaa soo waajahday shaqadaada waxaad ogaataa in ururku uu dhincaaga yahay marka ay dhibaatadu soo baxdo
· Ka mid ahaanshaha ururka SLNMA waxa ay ku siinaysaa in aad yeelato cod isla markaana aad xubin muhiim ah ka noqoto hanaanka caafimaadka ee dalka.
· Hadii aad tahay arday barta kalkaaliyenimo ama umulisonimo waxa uu ururku kuu diyaarinayaan in aad hesho tobabar iyo dad khibrad leh oo ku siiya tilmaan wax ku ool ah
· Ururku Waxa uu kuu yagleelayaa xidhiidho iyo ilo cusub oo aad ka hesho fikrado iyo talo kuu saamaxaya in aad si wacan u maamusho waqtigaaga iyo waxbarashadaadaba
· Hadii aad ururka xubin ka noqoto waxa lagu siinayaa Aqoonsi ay ku xardhan yihiin magacaaga, sawirkaaga, xirfadaada iyo waliba wixii aqoon ah ee aad xirfadaada ku xoojisay.
· Xubinimadaadu waxa ay fursad kuu siinaysaa adiga iyo xirfadalayaasha kaleba in aad si wada jir ah ugu dabaal degtaan maalmaha idiin gaarka,in la idiin aqoonsado shaqada wacan ee aad qabateen, waxbarshada aad korodhsateen iyo sidoo kale in lagugu abaal mariyo doorka aad ka qaadatay kor u qaadida caafimaadka somaliland
Last Updated on Tuesday, 03 February 2015 06:39